Ahoana Ny “Fanararaotampahefana” Sy Ny “Karoshi” No Mbola Miteraka Olana Ho An’ny Mpiasa Japoney · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Avrily 2018 13:46 GMT
Vakio amin'ny teny 繁體中文, Italiano, русский, Português, Español, polski, 日本語, English
Hoy ilay teny, “Miangavy, mba ekeo ho toy ny fahafatesana amperinasa ny fahafatesan'ilay tanora 20 taona izay niasa mandra-pahafatiny noho ny ‘fanararaotana fahefana‘ “. Sary avy amin'ny mpiaramiasa amin'ny Global Voices
Tamin'ny Martsa 2018, mpikatroka telo no nizara trakta ary niezaka nanangona sonia teo amin'ny fijanonan'ny fiarandalamby JR Rokkomichi, tao amin'ny paroasin'ny Nada ao amin'ny tanànan'ny Kobe. Nanao tatin'ivy manga teo ivelan'ny akanjony izy ireo miaraka amin'ny hafatra voasoratra amin'ny teny Japoney mivaky hoe:
Miangavy, mba ekeo ho toy ny fahafatesana amperinasa ny fahafatesan'ilay tanora 20 taona izay niasa mandra-pahafatiny noho ny ‘fanararaotana fahefana
Natao mba hisarihana ny sain'ny daholobe ho amin'ny fahafatesan'i Maeda Hayato ireo trakta, izay heverin'ireo mpanao hetsipanoherana fa vokatry ny “fanararaotana fahefana“, na hetraketraka eny am-piasana. Talohan'ny namonoany ny tenany, niasa tao amin'ny Goncharoff Chocolate i Maeda, mpanamboatra sôkôla malaza ao an-toerana manana toerana fivarotana ao amin'ny fiandrasana fiarandalamby ao Kobe.
Araky ny tantaran'ny Sankei Shimbun momba ny fahafatesany tamin'ny Desambra 2017, niditra tao amin'ny ekipan'ny Goncharoff i Maeda fony vao 20 taona monja ary niasa tao amin'ny iray amin'ireo fivarotan-dry zareo ao atsinanan'i Kobe. Nambaran'ilay lahatsoratra fa vetivety foana dia nampitomboina ny ora fiasan'i Maeda ary niaraka tamin'izany, mbola tsy norarahina na voamenomenon'ny lehibeny, indraindray aza mety tonga hatramin'ny 109 ora isambolana ny fotoana hiasany ivelan'ny ora fiasany. Namono tena tamin'ny fanimpazana ny tenany teo amin'ny lalamby tao amin'ny toerana fiandrasana fiarandalamby JR Settsu-Motoyama tao Kobe i Maeda tamin'ny 24 Jona 2016.
Midika hoe miasa amin'ny ora tsy mahazatra, manery ny mpiasa mba hiasa mihoatra an'ireo ora nifanarahana nefa tsy andraisana karama, arahan'ny menomenona sy fampijaliana ara-tsaina ny “Fanararaotana fahefana” raha ny ao Japàna no resahana. Tena manaraka antanan-tohatra be mihitsy ny fomba fijerin'ny firenena ny filozôfian'ny fitantanana mpiasa (fantatra amin'ny hoe “rafitrin'ny amperora”), izay mahatonga ny fanararaotana fahefana ho vao mainka mihabetsaka.
Raha voatonona ho tranga nanampy tosika ho any amin'ny famonoantena ny “fanararaotana fahefana”, mitovy amin'ny “karoshi” na “fahafatesana noho ny asa be loatra” ny fahafatesan'i Maeda taorinan'ny ora maro niasany. Ary raha sahirana mitazona fifandajana eo amin'ny asa sy ny fiainana andavanandro ny mpiasa ao amin'ny firenena, izay mpikambana ao anati'ny Fikambanana Ho An'ny Fiaramiasa Ara-toekarena Sy Fivoarana (OECD), fantatra nandritra ny 40 taona fa olana be ao amin'ny kolontsain'ny fiasàna Japoney ny “karoshi“. Nitatitra fa ao amin'ny iray amin'ny orinasa dimy, atahorana be mihitsy ny fanimban'ireo mpiasa ny fahasalaman'ny tenany amin'ny fanaovana 80 ora ambony ampanga isambolana.
Raha ampiasaina matetika ho fiteny mahazatra (ary tsy tena mamaritra rehefa miresaka momba ny fepetra hiasana), indraindray ampiasain'ny dokotera Japoney mba hamaritana fahafatesana tampoka noho ny aretimpo na fitsaharan'ny fo — ao koa ny famonoantena — taorian'ny asa be loatra ny teny hoe “karoshi”. Raha tokony hamaritra ny fetr'ora fiasana ny fehezandalàna momba ny asa, indraindray asain'ny mpampiasa miasa ora mihoatra ny tokony ho izy ny mpiasa nefa tsy andraisana karama. Misy koa ireo lalàna hafa momba ny asa izay mamela ny mpiasa hanaiky ny hiasa mihoatra noho izay ilaina.
Isantaona, eo amin'ny 200 eo ny fahafatesana avy amin'ny asa be loatra no hita, fa angamba ny famonoantenan'i Takahashi Matsuri, mpiasa tao amin'ny Dentsu, orinasa japoney malaza mpanao dokambarotra, no tranga ambony indrindra tato ho ato. Niasa mihoatra ny 105 ora ivelan'ny ora mahazatra isambolana i Takahashi tao amin'ny Dentsu alohan'ny namonoany ny tenany ary nibitsika fa ora roa isankalina fotsiny izy no mba matory.
Nanapaka ny fitsarana Japoney fa noho ny asa be loatra no nahafaty an'i Takahashi ary nametraka fialana ny filohan'ny Dentsu tamin'ny Desambra 2016 rehefa nisy tsindry be avy tamin'ny gazety. Nisy fanadihadiana mifanaraka amin'izay nampiseho fa nanitsakitsaka ny fitsipikin'ny asa ny Dentsu, ary voasazy 500,000 yen (US$4,400) ilay orinasa mpanao dokambarotra. Tsy nisy mpitantana voahenjika araka ny lalàna tamin'izany.
Tsy faly ny renin'i Takahashi Matsuri tamin'ny fanapahankevitry ny fanadihadiana ny tsy hanameloka ireo mpitantana.
Raha nampanantena ny Dentsu fa hanena ny ora fiasana ho 20% amin'ny taona manaraka, sady hanandratra ny asa atao avy any an-trano, mbola olana ara-tsosialy foana ny “karoshi” ao Japana. Tamin'ny 2016, nisy mpiasa maty tao amin'ny orinasa famokarana herinaratra — ary mpiasa faharoa koa tao amin'ny Dentsu — voalaza fa noho ny asa be loatra. Vao haingana, nisy rangahy maty tany avaratr'i Japana rehefa avy niasa tsy tapaka mihoatra ny 80 ora ivelan'ny ora nifanarahana isambolana.
Na dia fantatra aza fa olana ara-tsosialy ny “karoshi”, tsy dia betsaka ny nataon'ny governemanta Japoney mba hanakelezana an'ilay fomba fanao. Mba hiatrehana ny tsy fahampian'ny mpiasa sy ny famokarana ambany, nanomana ny hanalefaka ny lalàna Japoney mifehy ny ora ambony ampanga ny Governemantan'i Abe, mba hanamorana ny fiasan'ireo mpiasa misimisy kokoa. Fa noho ny rakitra diso, mbola nahanton'ny governemanta aloha izay hevitra izay.
Mandritra izay fotoana izay, raha tsy ny fifanakalozana teo amin'i Sankei Shimbum sy i Kazumi reniny, tsy dia nahasarika loatra ny sain'ny tontolon'ny gazety Japoney ny fahafatesan'i Maeda Hayato. Kanefa tapaka ny hevitr'i Maeda Kazumi ary mitaky onitra avy tamin'ny mpampiasa azy taloha ho an'ny fahafatesana aloha loatra nanjo ny zanany lahy. Mandritra ny fiandrasan'i Goncharoff ny fanapahankevitry ny biraon'ny as ao an-toerana, misy reniny nilaozan'ny zanany. Arakin'ny tenin'i Maeda Kazumi tamin'i Sankei Shimbun “Malahelo aho fa namoy ilay zanako lahy izay feno hafaliana sy malemy fanahy”